Waa maxay wareegga biyuhu maxay yihiin heerarkiisa ugu waaweyn? | Cusbooneysiinta Cagaaran
Muhiimadda wareegga biyuhu u leeyahay meeraha
Xaqiiqdii mararka qaarkood, noloshaada oo dhan, waxaa laguu sharxay waxa wareegga biyuhu yahay. Geedi socodka oo dhan ee ay leedahay tan iyo markii uu roobku da'o, baraf ama roobdhagaxyaale ilaa uu mar kale uumi baxo oo daruuro sameeyo. Si kastaba ha noqotee, qayb kasta oo ka mid ah geeddi-socodka ay wareegga biyuhu leeyihiin waxay leeyihiin waxyaabo iyo dhinacyo aasaas u ah horumarka nolosha iyo badbaadada nooleyaal badan iyo nidaamyadeeda deegaanka.
Ma jeclaan lahayd inaad tallaabo tallaabo u ogaato muhiimadda wareegga biyaha ee meeraha?
1 Waa maxay wareegga biyuhu?
2 Marxaladaha wareegga biyaha
3 Biyaha ku kaydsan badaha iyo badaha
4 Uumi bax
5 Biyaha ku kaydsan jawiga
8 Biyaha ku keydsan barafka iyo barafka
9 Biyo dhalaal
10 Dusha sare qulqulka
11 Durdur biyo ah
12 Kaydinta biyaha cusub
14 Dheecaanka dhulka hoostiisa
17 Kaydinta biyaha dhulka hoostiisa
Waa maxay wareegga biyuhu?
Dunida waxaa ku jira walax ku jirta dhaqdhaqaaq isdaba-joog ah waxayna ku jiri kartaa seddex xaaladood: adag, dareere iyo gaas. Waxay ku saabsan tahay biyaha. Biyaha si isdaba joog ah ayey isu beddelayaan oo waxaa iska leh geeddi-socod joogto ah oo balaayiin sano ka socday meeraheenna. Wareegga biyaha la'aantii, nolosha sidaan ognahay ma horumarin karin.
Wareegga biyuhu kuma bilaabmo meel gaar ah, taas oo ah, isagu ma laha bilow ama dhammaad, laakiin wuxuu ku jiraa dhaqdhaqaaq joogto ah. Si aan u sharaxno una fududeyno, waxaan u ekeysiin doonnaa bilow iyo dhammaad. Wareegga biyuhu wuxuu ka bilaabmaa baddaha. Halkaas, biyuhu way uumi baxaan oo waxay galaan hawada, waxayna isu beddelaan uumiga biyaha. Xawaaraha hawada ee sii kordhaya sababo la xiriira kala duwanaanta cadaadiska, heerkulka iyo cufnaanta ayaa sababa uumiga biyaha inuu gaaro lakabyada sare ee jawiga, halkaasoo heerkulka hawadu hoose uu sababayo inay biyuhu isku soo ururaan daruurahana ay samaysmaan. Markay socodka hawadu koraan oo is beddelaan, daruuraha waxay ku koraan baaxad iyo dhumuc, ilaa ay ka soo dhacaan roobab da'ay.
Roobku wuxuu ku dhici karaa dhowr siyaabood: biyo dareere ah, baraf ama roob dhagaxyaale. Qaybta roobka ee ku dhaca qaabka barafka ayaa uruursanaya samaynta go'yaal baraf iyo baraf. Kuwani waxay awood u leeyihiin inay keydsadaan biyaha la qaboojiyey malaayiin sano. Biyaha intiisa kale waxay ku dhacaan qaab roob ah oo ku dhaca badaha, badaha iyo dusha sare ee dhulka. Saamaynta cuf isjiidadka dartiis, markay ku soo dhacaan dusha sare, qulqulka dusha sare ayaa la soo saaraa oo keena wabiyo iyo durdurro. Wabiyada, biyaha waxaa dib loogu celiyaa badda. Laakiin dhammaan biyaha ku dhaca dhulka dushiisa oo dhan ma galaan webiyada, intii badana way ururaan. Qeyb weyn oo ka mid ah biyahani waa ku dhex milmay dhexgalka waana sii keydisaa sidii biyaha dhulka hoostiisa. Mid kale ayaa lagu keydiyaa sameynta harooyin iyo ilo.
Biyaha qulqulaya ee gacma-gacmeedka ayaa waxaa nuugaya xididdada dhirta si ay u quudiyaan oo qayb ka mid ahi u gudubto dusha caleemaha, sidaa darteed mar labaad ayuu jawiga ku soo noqonayaa.
Ugu dambeyntiina, biyaha oo dhan waxay dib ugu noqdaan badda, maxaa yeelay waxa uumi baxa, macquul ahaan, waxay dib ugu soo dhacaan qaab roobab ah oo ku dhaca badaha iyo badaha, iyagoo "xira" wareegga biyaha.
Marxaladaha wareegga biyaha
Wareegga biyuhu wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo midba midka kale u raacayo heerar. Ku Sahanka Juqraafiga Mareykanka (USGS) waxay aqoonsatay 15 qaybood oo wareega biyaha ah:
Biyaha ku kaydsan badaha
Biyaha ku keydsan barafka iyo barafka
Dusha sare qulqulka
Durdur biyo ah
Biyo macaan oo la keydiyay
Dheecaanka dhulka hoostiisa
Kaydinta biyaha dhulka hoostiisa
Qeybinta biyaha caalamiga ah
Biyaha ku kaydsan badaha iyo badaha
In kasta oo loo malaynayo in baddu ay ku jirto geeddi socod isdaba-joog ah, haddana xaddiga biyaha lagu kaydiyo badaha ayaa aad uga badan kan uumi baxa. Waxaa jira qiyaastii 1.386.000.000 oo kiiloomitir kilomitir oo biyo kayd ah oo ku jira badda, kuwaas oo ka mid ah kaliya 48.000.000 kiiloomitir cubic waxay ku jiraan dhaqdhaqaaq isdaba-joog ah iyada oo loo marayo wareegga biyaha. Badaha ayaa masuul ka ah 90% uumi baxa aduunka.
Badaha baddu waxay ku jiraan dhaqdhaqaaq joogto ah taas oo ay ugu wacan tahay dhaqdhaqaaqa jawiga. Sababtaas awgeed, waxaa jira durdurrada ugu caansan adduunka sida Gulf Stream. Waad mahadsan tihiin xilliyadaan, biyaha ka imanaya badaha waxaa loo qaadayaa dhammaan meelaha Dunida ku yaal.
Horay ayaa loo soo sheegay in biyuhu ay ku jiraan is bedel joogto ah oo gobolka ah: uum, dareere iyo adke Uumi-baxa waa habka ay biyuhu ugu beddelaan xaaladdooda dareeraha una beddelaan gaas. Waad ku mahadsan tahay, biyaha laga helo wabiyada, harooyinka iyo badaha dhexdooda waxay dib ugu soo laabtaan jawiga qaab uumis ah, markay is uruursadaanna waxay samaystaan ​​daruuro.
Xaqiiqdii waad u maleysay sababta biyuhu way uumi baxaan hadaanay karkarin. Tani waxay dhacdaa maxaa yeelay tamarta deegaanka ku jirta oo ah qaab kuleyl ah waxay awood u leedahay inay jabiso silsiladaha isku haaya mootooyinka biyaha. Markii silsiladahan la jabiyo, biyuhu waxay isu beddelaan xaalad dareere ah oo waxay u beddelaan gaas. Sababtaas awgeed, marka heerkulku kaco ilaa 100 ° C, biyuhu way karkaraan waana sahlan tahay oo dhaqso badan tahay in laga beddelo dareeraha oo loo beddelo gaas.
Isugeynta isu geynta biyaha, waxaa la dhihi karaa xaddiga biyaha uumi baxa, waxay ku dambeeyaan inay mar kale ku dhacaan qaab roobab. Tani si kastaba ha noqotee juquraafi ahaan way ku kala duwan tahay. Badweynta dhexdeeda, uumi baxa ayaa ka badan roobka; halka roob da'a uu ka sareeyo uumi-baxa. Qiyaastii 10% biyaha kaliya uumi ka baxda badaha ayaa ku soo dhacaya Dhulka qaab roobab ah.
Biyaha ku kaydsan jawiga
Biyaha waxaa lagu keydin karaa jawiga qaab uumiga, qoyaanka, iyo sameynta daruuro. Ma jiraan biyo badan oo ku kaydsan cimilada, laakiin waa waddo dhakhso leh oo loogu talo galay in biyaha lagu qaado oo adduunka loogu wareejiyo Had iyo jeer biyo ayaa ku jira jawiga xitaa haddii aysan jirin daruuro. Biyaha ku kaydsan jawiga waa 12.900 kiiloomitir kiilomitir.
Qeybtaan wareegga biyaha waa halka ay uga baxdo gaaska oo ay u gudubto xaalad dareere ah. Qeybtaan Waa daruuri in daruuraha la sameeyo in, hadhow, roobka siin doono. Uumiga ayaa sidoo kale mas'uul ka ah dhacdooyinka sida ceeryaanta, qulqulka daaqadaha, xaddiga qoyaanka maalinta, dhibcaha ka dhasha muraayadda hareeraheeda, iwm.
Mawjadaha biyaha waxay isku daraan waxyaabo yaryar oo ah boodh, cusbo, iyo qiiq si ay u noqdaan dhibco daruur, kuwaas oo kora oo sameeya daruuro. Marka dhibcaha daruurtu isu yimaadaan way weynaadaan cabirkooda, samaynta daruuro iyo roob ayaa dhici kara.
Roobab waa daadad biyo ah, labadaba dareere iyo qaab adag. Inta badan dhibcaha biyaha ee sameeya daruur ha degdegin, Tan iyo markii ay ku hoosjiraan xoogga mowjadaha hawada sare. Si ay roob u dhacdo, dhibcaha waa inay marka hore isku urursadaan oo ay isku dhacaan, iyagoo sameeya dhibco biyo waaweyn oo culus oo ku dhici kara kuna guuleysan kara iska caabbinta ay hawadu saareyso. Si aad u sameysid dhibic roob waxaad u baahan tahay dhibco daruur badan.
Biyaha ku dhaca gobollada heerkulkoodu marwalba ka hooseeyo 0 ° C, biyaha waxaa lagu keydiyaa sameysmada baraf, baraf baraf ah ama baraf baraf ah. Qiyaastan biyaha ah ee ku jirta xaalad adag ayaa la keydiyaa waqti dheer. Inta badan barafka adduunka, qiyaastii 90%, waxaa laga helaa Antarctica, halka 10% soo hadhay ay ku sugan yihiin Greenland.
Biyaha ka dhasha dhalaalida baraf-barafka iyo barafka iyo barafka barafka waxay ku qulqulayaan koorsooyin biyo ah sida daadad. Adduunka oo dhan, qulqulka biyaha ay soo saaraan meltwater waa qayb muhiim ka ah wareegga biyaha.
Inta badan biyahan dhalaalay waxay dhacdaa guga, marka heer kulku kaco.
Dusha sare ee qulqulka biyaha waxaa sababa biyaha roobka waxaana caadi ahaan loo hogaamiyaa marin biyood. Inta badan biyaha wabiyada waxay ka yimaadaan biyaha dushooda. Markii uu roob da’o, qayb ka mid ah biyahaas waxaa qaata dhulka, laakiin markii uu noqdo mid dheregsan ama aan la dabooli karin, wuxuu bilaabaa inuu ku dul ordo dhulka, iyadoo la raacayo jiirada foorara.
Qaddarka qulqulka dusha sare wuu ku kala duwan yahay xiriirka waqtiga iyo juqraafiga. Waxaa jira meelo roobku badan yahay oo aad u daran una horseeda daadad xoog leh.
Biyuhu waxay ku jiraan dhaqdhaqaaq isdaba joog ah maadaama ay noqon karaan webi. Webiyadu waa u muhiim dadka iyo noolaha kaleba. Webiyada waxaa loo isticmaalaa inay bixiyaan biyo la cabbo, waraab, soo saar koronto, baabi'inta qashinka, alaabada gaadiidka, helitaanka cuntada, iwm. Inta kale ee nool waxay u baahan yihiin biyaha wabiga oo ah deegaan dabiici ah.
Webiyadu waxay ka caawiyaan inay biyo-fadhiisiga ka buuxaan biyo, maxaa yeelay waxay ku soo daayaan biyo sariirahooda. Iyo, badaha waxaa lagu hayaa biyo, sida webiyada iyo qulqulaya ay had iyo goor biyo ugu shubayaan iyaga.
Kaydinta biyaha cusub
Biyaha laga helo dusha sare ee dhulka waxaa loo kaydiyaa laba siyood: dusha sare sida harooyin ama biyomareenno ama dhulka hoostiisa ah. Qeybtaan keydinta biyaha ayaa muhiimad weyn ugu fadhiya nolosha Dunida. Biyaha dusha sare waxaa ka mid ah durdurrada, balliyada, harooyinka, baraagaha (harooyinka dadku sameeyeen), iyo dhul biyoodyo qoyan.
Wadarta guud ee biyaha wabiyada iyo harooyinka ayaa had iyo jeer isbedelaya sababo la xiriira biyaha galaya kana baxa nidaamka. Biyaha ka soo gala roobka, qulqulka, biyaha ka baxa soo dhex gala, uumi baxa ...
Gelitaanka waa socodka hoose ee biyaha dhulka dushiisa una dhaqaaqa carrada ama dhagaxyada qulqulka leh. Biyahaan biya baxa ah waxay ka yimaadaan roobab. Qaar ka mid ah biyaha soo gala gudaha waxay ku sii jiraan lakabyada dusha sare ee dusha sare waxayna dib u geli karaan marin biyoodka markay ka soo galaan. Qeyb kale oo biyaha ka mid ah ayaa si qoto dheer u dhex gali kara, sidaasna dib loogu cusbooneysiiyo biyomareennada dhulka hoostiisa mara.
Waa dhaqdhaqaaqa biyaha oo dhulka ka soo baxa. Xaalado badan, biyo-mareenka ugu weyn ee webiyada wuxuu ka yimaadaa biyaha dhulka hoostiisa.
Ilaha biyaha waa meelaha lagu shubo biyaha dhulka hoostiisa. Gu 'ayaa dhasha marka biyo-mareenku buuxsamo illaa halka ay biyuhu ku rogmadaan oogada dhulka. Ilaha biyuhu way kala duwan yihiin, laga soo bilaabo ilo yar oo kaliya qulqulaya kadib roobab culus, ilaa barkadaha waawayn ee ay ku socdaan milyan oo litir oo biyo ah maalin kasta.
Waa habka uumiga biyuhu uga baxo dhirta isagoo maraya dusha caleemaha wuxuuna galayaa jawiga. Sidan oo kale ayaa loo yidhi, dhididka ayaa ah xaddiga biyaha uumi baxa caleemaha dhirta. Waxaa lagu qiyaasaa in agagaarka 10% qoyaanka jawiga waxay ka timaaddaa dhididka dhirta.
Nidaamkan, marka la eego sida ay u yar yihiin dhibcaha biyaha uumiga ah, lama arko.
Biyahaani waa waxa soo haray malaayiin sano waana qeyb ka mid ah meertada biyaha. Biyaha gunta hoose ayaa sii socda, in kastoo aad u gaabis ah. Aquifers waa bakhaarrada waaweyn ee biyaha ee Dunida dad badan oo adduunka ku noolna waxay ku tiirsan yihiin biyaha dhulka hoostiisa.
Iyada oo dhammaan heerarka lagu sharraxay waxaad awood u yeelan doontaa inaad yeelato aragti ballaadhan oo sii ballaadhan oo ku saabsan wareegga biyaha iyo muhiimadda ay u leedahay heer caalami ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Muhiimadda wareegga biyuhu u leeyahay meeraha
Maria B dijo
Waan jeclaaday qoraalkaaga. Aad u sharaxan.
Waxay u muuqataa in qodobka ugu dambeeya uu maqan yahay: Biyo-qaybinta caalamiga ah.
Aad baad ugu mahadsantahay inaad noo iftiimisay mowduucan xiisaha badan.
Jawaab María B.
Aad baad ugu mahadsantahay akhrintiisa! Salaan!